आजभोली किन बारम्बार गइरहन्छ बत्ति ? « Salleri Khabar
आजभोली किन बारम्बार गइरहन्छ बत्ति ?
११ जेठ, काठमाडाैँ । पछिल्ला केही दिनयता सर्वसाधारण झ्याप झ्याप बत्ती जाँदा हैरान भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको फितलो व्यवस्थापनका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो नै बत्ती आउने जाने भइरहेको छ । यस्तै समस्या देशका अन्य प्रमुख सहरमा समेत हुने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् ।